Mahery setra milaza
Janoary 14, 2015 amin'ny 1:35 aho
Misaotra betsaka noho ny asa mafy sy ny fa Tena Plugin!
Faniriako ny hoe lehibe kokoa ity ny fahavokarana eo amin'ny New 2015 Taona!
Ary mino aho fa ny rehetra indrindra fa hiombon-kevitra amiko, Te-hahita oftener 😉 vaovao farany
Mamerina ny fisaorana anao, ary miandry izany endri-javatra mahatahotra!
Febroary 18, 2015 amin'ny 4:36 aho
Tohizo ny asa lehibe, iray! Tena faly aho nahita Transposh ary hitohy ny hanohana anao aho na izany aza dia afaka. VITA TSARA!
Steen Grønfeldt milaza
Martsa 6, 2015 amin'ny 4:58 am
Ity no fotoana voalohany mahita ny plugin – Tsy maintsy manome Jer, dia tena kafetsena! Efa niara-niasa toy ny mpandika teny nandritra ny taona maro, ary eto aho no miasa amin'ny – Hiezaka ny hanome ny fandraisana anjara amin'ny fanatsarana ny fandikan-teny danoà ny pejy!